Waya kusvetuka tambo PVC PU yakavharwa
Tambo yekusvetuka tambo yakatetepa uye mubato wakapfupika, saka tambo inoshanduka nekukurumidza, saka inyanzvi yekusvetuka tambo, asi haina kusimba uye iri nyore kudambuka, saka unogona kutenga mamwe mashoma panguva.Inokodzera vanhu vanosimbisa muviri.
Sei uchisarudza waya yekusvetuka tambo?
Ngatifananidzei tambo dzakawanda dzakajairika pamusika.
1. Plastic skipping tambo
Tambo yepurasitiki yakachipa pakati petambo dzese dzekusvetuka, uye zvakare yakasimba, isiri nyore kupfundora, uye inodhura-inoshanda, asi huremu hwakanyanyisa, hwakakodzera kune vanotanga.
2. Cotton skipping tambo
Tambo yekusvetuka yedonje yakaoma zvine mwero uye ine huremu huri pakati nepakati.Kana ukairova netsaona, haizokukuvadza, asi kazhinji inononoka kusvetuka uye inonyanya kukodzera kune vanotanga.Vanhu vakwegura vanogonawo kusarudza.
3. Bamboo kusvetuka tambo
Bamboo skipping tambo kazhinji ine mubato wakareba, wakakodzera tambo dzekusvetuka, uye tambo hadzizosungirwe pamwechete.Tambo dzine huremu hwakati uye dzinogara kwenguva refu.Dzakakodzera vanhu vakawanda.
4. Steel waya kusvetuka tambo
5. Naironi yekusvetuka tambo
Naironi kusvetuka tambo yakasimba uye yakareruka, asi hazvisi nyore kubata ruoko ruchinzwa kana uchidedera.Yakanyanya kukodzera kushandiswa nemunhu mumwechete, haina kukodzera kuti vanhu vakawanda vasvetuke tambo huru.
6. Tambo yerabha
Tambo yerabha yakasimba zvikuru uye haipfeki, asi kazhinji inorema, uye zvinonyanya kuomera vanhuwo zvavo kuti vazununguke, uye zviri nyore kuzvigumbusa.Kunze kwekunge hunyanzvi hwekusvetuka huri nani, usasarudza tambo iyi yekusvetuka.
Zviripachena, iyo waya yekusvetuka tambo inonyanya kushanda kune bodybuilders
Zvino Ngationei Bangyi waya yekusvetuka tambo:
Item PVC/PU coated simbi waya tambo kusvetuka tambo
Material Waya yemukati: Magetsi emagetsi/Hot-dip galvanized/304 simbi isina tsvina tambo
Kupfeka kwekunze: PVC/PU/Naironi
Diameter Waya yemukati: 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm
Mushure Coating: 2.5mm, 3.8mm, 4.0mm
Package Hapana tambo yekucheka yakarongedza mucoil, reel yemapuranga, reel yepurasitiki;
Kana cheka kuita 2.75m, 3m wobva waiswa mupp bag;
Kana imwe customized package
Zvakapfuura: 7*7 1*19 PVC/PU yakavharwa simbi waya tambo kusvetuka tambo 3mm 4mm
Zvinotevera: 6 * 7 + FC Kupisa-Dip Galvanized simbi waya tambo 1.5-12 mm
7 * 7 3mm PVC yakavharwa simbi waya tambo
Steel Wire Tambo Pvc Galvanized
svetuka tambo tenga, nyanzvi yekusvetuka tambo, bata kusvetuka tambo, kusvetuka tambo akachenjera, kugwinya kusvetuka tambo, tambo yokusvetuka isina tambo,